Fanodinana fako elektronika - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Ny fako elektronika na e-fako dia ny fako mifandray amin'ny fampiasana sy fanariana fitaovana elektronika toy ny solosaina, fahitalavitra ary mpanonta.
Ny fanodinana e-fako dia ny fanodinana izany ho zavatra vaovao. Ny loharanon-karena hita ao amin'ny e-fako toy ny firaka, phosphore, mercury, aliminioma, varahina ary plastika dia azo averina sy averina averina. Ny fitaovana informatika tranainy matetika dia maka toerana sarobidy. Ny fanodinana dia manafaka ity toerana ity amin'ny fomba mitsinjo ny tontolo iainana.
Tsy manana rafitra nasionaly fanodinana fako elektronika i Aostralia amin'izao fotoana izao, na dia misy fandaharanasa fanangonana fako elektronika maromaro ao amin'ny Central Coast.
Ny Filankevitry ny morontsiraka afovoany izao dia manaiky fako elektrônika an-tokantrano tsy misy fetra izay azo ariana maimaim-poana any amin'ny Tobim-pitantanana ny fako telo.
Ny entana azo ekena dia ahitana: izay vokatra elektrônika misy tady tsy misy ranon-javatra toy ny: televiziona, monitors ordinateur, kapila mafy, klavier, solosaina finday, periferika amin'ny solosaina, scanner, mpanonta printy, fotokopia, milina fax, fitaovana audio, fanamafisam-peo, fitaovana elektronika, fitaovana elektronika zaridaina, kojakoja madinika ao an-tokantrano, mpilalao horonan-tsary / DVD, fakan-tsary, finday, console lalao ary mpanadio banga. Whitegoods, anisan'izany ny microwave, ny rivotra sy ny fanafanana menaka dia ekena maimaim-poana mba ho recycle ho vy.
Toerana fialan-tsasatra North Central Coast
Tobim-pitantanana ny fako ao Buttonderry
Toerana: Hue Hue Rd, Jilliby
Toerana fanalana ny morontsiraka Afovoany Atsimo
Woy Woy Fitantanana ny fako
Toerana: Nagari Rd, Woy Woy
Kitiho eto raha te hahalala bebe kokoa momba ny serivisy fanodinana e-fako an'ny Councils.
Ny finday dia azo averina amin'ny alàlan'ny MobileMuster. Izy io dia programa fanodinana finday maimaim-poana izay manaiky ny marika sy karazana finday rehetra, miampy ny bateria, ny charger ary ny kojakojany. MobileMuster dia miara-miasa amin'ny mpivarotra finday, ny filan-kevitra eo an-toerana ary ny Australia Post mba hanangona telefaona avy amin'ny besinimaro. Tsidiho ny MobileMuster tranonkala hahitanao ny toerana ahafahanao manodina ny findainao.